​Somaliland: Mas'uul katirsan UCID oo la xiray
HARGEYSA,Somaliland- Ciidamada ammaanka, ayaa xabsiga u taxaabay guddoomiyihii gobolka Saaxil u qaabilsanaa xisbiga UCID Marwo Rooda Axmed­ Yaasiin iyo laba xubnood oo kale, sida uu warbaahinta u xaqiijiyey xoghayaha warfaafinta ee xisbgaasi.
Marwo Rooda, ayaa safar ku ahayd caasimadda Hargeysa, iyadoo kasoo socdaashay magaalada Berbera, waxaase la ogayn halka lagu xiray sida uu xaqiijiyay xoghaye Yuusuf Keyse.
Marwo Rooda ayaa hormood u ahayd olole dad badan oo reer Berbera ahi kaga soo horjeedaan wareejinta dekedda Berbera ee shirkadda DPWorld, iyadoo warbaahinta si joogto ah u marinaysay dhaleecayn ku aadan xukuumadda Somaliland.
Majirto ilaa hadda wax war ah oo kasoo baxay dhinaca xukuumadda Somaliland oo ku aadan xarigga mas'uulkaasi oo kuu biirtay dad horay loogu xiray arrinta la xiriirta dekedda Berbera.
Somaliland: Khilaafkii xisbiga Ucid oo go'aan laga soo saaray
Somaliland 21.07.2016. 14:20
Gudiga diiwaan-gelinta ururada siyaasada Somaliland ayaa go’aamo ka soo saaray khilaafka UCID, sida ay kaga dhawaaqeen shir jaraa’id oo ay ku qabteen Hargeysa.
Halkan Ka Akhri Nuxurka 9-qodob ee laga soo saaray Murankii u dhexeeyey Garabyada Xisbiga
Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay geeridda Xudeydi 08.04.2020. 10:35